Malunga nathi-i-D & L yeShishini kunye noRhwebo (Xuzhou) Co. Ltd.
Isiqubulo seNkampani siya apha
Umzi-mveliso we-D & L kunye noRhwebo (i-Xuzhou) Co Ltd. ibaluleke kakhulu ekufumaneni nakwizibuko zokwenza izinto, kukho uthotho oluninzi, njengezibuko zonyuselo, iiglasi zohlobo lwefashoni, izibuko zemidlalo, izibuko zetheko, izibuko zelanga ezibekwe, izibuko zetempile yoqalo kunye nezibane zelanga zomthi. Silungiselele iiglasi zelanga ezigciniweyo kwaye sinako ukwenza logo ngokwezifiso kuthotho ngalunye, sinokunikezela ngenkonzo yokuhlekisa ngokhetho lombala kunye nolwakhiwo lwe logo.
Ulawulo loMgangatho oGqibeleleyo
Sineqela lolawulo lomgangatho wobuchule kunye nenkqubo yokukhuthaza inkqubo.
Iifektri eziyi-7 zobungcali ezingama-500,000 ngambini / umzi-mveliso ngamnye / ngenyanga nganye ixesha elizi-3 ~ 15 lokuhambisa ixesha
Inkonzo ekuMgangatho oPhakamileyo ngokukhawuleza
Ngaphantsi kweeyure ezi-2 kuphando ngalunye iiyure ezingama-24 ngosuku iintsuku ezingama-365 ngonyaka
Ukusebenza kweNdleko eziGqwesileyo
Phendula ngokukhawuleza; Intelekelelo yamaXabiso yoBuchule; Ukuhanjiswa okukhawulezayo; Umgangatho ophezulu; Uqinisekiso lwezoRhwebo.
Uninzi lweodolo lwethu lwesiko lubekelwe bucala kungaphelanga usuku olu-1 kwaye luyalelwe kuthi ngokuqhubekayo. Yonke imibuzo yethu iyaphendulwa ngeyure ezi-1 ukuya kwezi-4, eyona ikhawulezayo ingaphakathi kwemizuzu emi-5, ixesha elikhokelayo loku-odola ukugcinwa kwiveki e-1, kwiodolo yelogo yesiko ngeentsuku ezili-12 ukuya kwezi-15. Njengoncedo lwethu, sinokubonelela ngexesha elifanelekileyo lokuhambisa, iiglasi ezintle, kwaye ngexesha elifanelekileyo emva kwenkonzo yokuthengisa. Sivuyiswa kukubona iimveliso zethu zachukumiseka kwaye zafumana uphononongo oluninzi oluvela kubasebenzisi. Abathengi abaninzi ba-odola kuthi ngokuqhubekayo inyanga nenyanga, nonyaka nonyaka.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngayo nayiphi na imibuzo kwizibuko zelanga, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukukunikezela ngeemveliso eziphambili kunye nenkonzo ukufezekisa impumelelo yethu!